Reviews Software Drake Tax 2021
Bogga ugu weyn Reviews Software Drake Tax 2021
Wax ka qabashada canshuuraha waa shaqo aad u adag, xilliga canshuurtuna waxay culeys weyn saartaa ganacsiyada iyo dadka shaqeeya si ay si hufan u maareeyaan. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka software-ka diyaarinta cashuurta saxda ah waxa laga yaabaa inay ka dhigto waxa u muuqda shaqada ugu adag ee sannadka wax yar oo loo adkaysan karo.
Inkasta oo ay jiraan wax badan oo ka mid ah software-ka canshuuraha ee suuqa, Drake tax Software wuxuu cadeeyay inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo si ballaaran loo isticmaalo sababtoo ah tayada badeecadeeda oo dhan. Software-ka canshuurta Drake waxaa isticmaala in ka badan 59,000 oo xirfadlayaal canshuur ah oo dalka oo dhan ah, waxayna ka shaqeysaa in ka badan 33 milyan oo federaal iyo gobol ah oo la aqbalo soo celinta sanad kasta.
Dib u eegista Cashuuraha Drake, waxaad ka heli doontaa macluumaadka khuseeya software-ka, sifooyinkiisa, qiimaynta iyo sababta ay muhiimka u tahay.
Waa maxay Cashuurta Drake?
Drake Tax waa shirkad xisaabin yar iyo mid dhexdhexaad ah oo ah qaybta maaraynta cashuuraha. Waa xal software cashuureed by Drake Software, oo waa mid ka mid ah alaabtooda.
Hadafkoodu waa inay u fududeeyaan xirfadlayaasha cashuuraha inay si dhakhso leh oo hufan u xareeyaan soo celinta si ay wakhti badan ugu qaataan la macaamilka macaamiisha iyo kobcinta ganacsigooda.
Drake Tax waxay sidoo kale yaraynaysaa furayaasha furaha waxayna fududaysaa gelida xogta iyadoo la isticmaalayo furayaasha gaaban iyo macros si loo dedejiyo habka soo celinta soo celinta.
Marka isticmaalayaashu soo gudbiyaan xogta, software-ku wuxuu xisaabin karaa soo celinta si toos ah. Drake Tax waxay sidoo kale bixisaa awooda lagu dhoofiyo macluumaadka canshuurta K-1 Foomka 1040, iyo sidoo kale 8615 macluumaadka canshuurta waalidka foomamka 8615 ee ilmaha. Isticmaalayaasha waxay u diyaarin karaan soo celinta gobolo badan waxayna daabacan karaan foomamka canshuurta ee Isbaanishka.
Isticmaalayaashu waxay sidoo kale barbar dhigi karaan canshuuraha sanadba sanadka ka dambeeya iyaga oo isticmaalaya software-ka, kaas oo u oggolaanaya inay qiimeeyaan sanado badan oo canshuur ah. Isticmaalayaashu waxay si degdeg ah u ogaan karaan oo ay u xallin karaan khaladaadka xisaabinta soo noqoshada. Ugu dambayntii, barnaamijku wuxuu awood u siinayaa inay e-mail ku xareeyaan canshuur celinta federaalka iyo gobolka.
Akhri ALSO: Software -ka Canshuurta ee ugu Fiican Xirfadlayaasha Canshuurta 2021 -ka
Waa maxay faa'iidooyinka Drake Tax Accounting Software?
Drake Tax waa qalab kombuyuutar oo awood leh, la isku halayn karo, oo si sahlan loo isticmaali karo oo loogu talagalay diyaarinta canshuuraha iyo xirfadlayaasha u adeega ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Waxay ka sarraysaa softiweerka kale ee canshuuraha sababtoo ah warbixinteeda la habeeyey, taasoo bixisa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dhinacyo badan oo hawlaha shirkadda ah.
Waxa ku jira qayb bixisa aragtida guud ee caafimaadka iyo hufnaanta ganacsiga macmiilkaaga, marka lagu daro adeegyada diyaarinta cashuuraha oo heersare ah. Tilmaamaha kale ee gaarka ah waxaa ka mid ah:
Canshuur celin shaqsi ama mid la isku daray ayaa diyaar ah.
Xisaabiyaha kaydka ugu fiican iyo amaahda oo leh taageero hantidhawr guud
Soo celinta xereynta waa hab fudud oo degdeg ah.
Si elektaroonik ah u xarayso cashuurahaaga
Qiyaasta Degdegga ah waxa uu soo bandhigayaa soo laabashada dhowr jeer oo keliya.
Akhri ALSO: Sababta Ganacsi kastaa ugu baahan yahay Garyaqaanka Canshuurta 2021 | Waa In La Akhriyo
Astaamaha Muhiimka ah ee Drake Tax Software
Drake Tax Software waxay la socotaa qalabyo iyo astaamo kala duwan si ay kaaga caawiyaan hawl-maalmeedka ganacsigaaga, taasoo adiga iyo shaqaalahaaga ka dhigaysa mid waxtar iyo waxtar leh. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad ku bixiso wakhtigaaga qiimaha leh si aad u kobciso shirkaddaada. Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah sifooyinka muuqda ee software-ka:
Qulqulka Xogta Si Toos ah: Awooddan-mid-ka-nooc ah waxay u oggolaanaysaa xogta inay ka soo qulqulaan soo laabashada qaran ee gobolka iyo soo celinta magaalada si toos ah. Si kale haddii loo dhigo, waxay si toos ah u soo saartaa soo noqoshada gobolka iyo magaalada.
Tilmaanta waqti-badbaadinta: Is-dhexgalkeeda fudud oo degdegga ah wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si degdeg ah u geliso xogta, socodsiiso lacag-celinta, iyo foomamkeeda.
Xogta sannadkii hore: Drake si fudud oo degdeg ah ayuu u ururiyaa oo beddelaa xogta sannadkii hore bilawga xilliga ama mar kasta oo loo baahdo.
Furayaasha Gaaban iyo Macros: Macros gaar ah ama habab gaaban oo horay loo qorsheeyay ayaa fududeeya xogta ku jirta software-kan.
Sifada Auto-buuxinta: Markaad gelayso magacyada iyo ciwaannada shirkadda, summada ZIP-ka iyo xog-ururinta EIN waxay ku badbaadinayaan wakhti. Gelitaan kasta oo ZIP code ah ayaa si toos ah u buuxin doona goobaha gobolka iyo magaalada. Marka aad soo gasho shirkad leh EIN, EIN-ku-jiraa wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si toos ah u buuxiso magacyada iyo cinwaannada shirkadaha gelitaanka xiga.
Saxeexa Da'da Dijital ah: Saxiixa E-saxiixa waxa taageera software-ka cashuuraha Drake ee codsiyada bangiga, foomamka oggolaanshaha, iyo foomamka oggolaanshaha.
Waa maxay faa'iidooyinka Drake Tax Software?
Mid ka mid ah sifooyinka xiisaha badan ee Drake Tax waa in ay u ogolaato isticmaalayaasha inay si degdeg ah u qiimeeyaan oo ay e-mail ugu gudbiyaan soo celinta ay diyaarinayaan.
Software-ku wuxuu soo bandhigayaa natiijooyinka xisaabinta marka ay xisaabiyaan soo celinta. Natiijo ahaan, waxay awoodi doonaan inay sheegaan haddii soo celinta ay u qalanto xaraynta elektaroonigga ah. Intaa waxaa dheer, software-ku wuxuu soo bandhigayaa khidmadaha iyo sidoo kale qadarka soo celinta natiijooyinka xisaabinta.
Intaa waxaa dheer, macaamiishu waxay si fudud u go'aamin karaan haddii ay jiraan wax dhibaato ah xisaabinta soo noqoshada. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in Drake Tax ay soo saarto digniinaha qaladka ka dib xisaabinta soo celinta.
Ogeysiisyada khaldan waxay ka kooban yihiin tilmaamo ku saabsan sida loo saxo khaladaadka loogana fogaado dhibaatooyinka keeni kara diidmada IRS. Waxa kale oo ay ku dari karaan qoraalo foomamka cashuuraha iyo soo celinta si ay u xasuusiyaan naftooda ama ay u gudbiyaan macluumaadka muhiimka ah shaqaalahooda.
Drake Tax sidoo kale waxay u ogolaataa isticmaalayaasha inay foomamka canshuurta galiyaan software-ka. W-2, K-1, iyo 1040 waa tusaalayaal qaababkan. Waxay isticmaali karaan iskaanka barcode 2D si ay u soo dejiyaan Foomamka W-2 iyo K-1, kuwaas oo ay ikhtiyaar u leeyihiin inay la dhexgalaan software-ka.
Software-ku wuxuu sidoo kale u ogolaanayaa inay u dhoofiyaan macluumaadka canshuurta foomamka canshuuraha marka lagu daro gelida foomamka canshuurta. Waxay awood u yeelan doonaan inay ka dhoofiyaan xogta canshuurta K-1 laga bilaabo 1041, 1120S, iyo 1065 waxay ku noqonayaan Foomka 1040, tusaale ahaan.
Isticmaalayaashu waxay sidoo kale isticmaali karaan shaqada e-filing ee Drake Tax si ay u xareeyaan canshuur celinta onlayn. Waxay ku lifaaqi karaan dukumeenti PDF si ay u soo celiyaan inta e-buuxinta. Drake Tax waxay siisaa macaamiisha ikhtiyaarka ah inay isticmaalaan suufka saxeexa si ay si elektaroonik ah u saxeexaan soo celinta, taas oo meesha ka saaraysa baahida waraaqaha waraaqaha ee soo celinta.
Intaa waxaa dheer, barnaamijku waxa uu shaqaalaysiiyaa shaashado sir ah iyo oggolaansho kuwaas oo loogu talagalay in ay u fududeeyaan macaamiisha si ay u ansixiyaan soo celinta. Isticmaalayaashu hadda waxay e-mail u diri karaan soo celinta gobolka iyo federaalka si gooni ah ama si wadajir ah iyagoo isticmaalaya qaabkan e-filing.
Akhri ALSO: Faallooyinka FileYourTaxes.com ee 2021: Sharci ama Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Maxaa ka sooca cashuurta Drake cashuuraha kale?
Qaar ka mid ah sifooyinka ka sooca cashuurta Drake kuwa kale waxaa ka mid ah:
1. Waraaqaha Drake:
Haddii aad ka daashay la macaamilka dhammaan dukumentiyada waraaqaha ah ee xafiiskaaga, Drake Documents ayaa ku caawin kara sababtoo ah waxay bixisaa kayd elektaroonik ah oo ammaan ah oo sugan. Dhammaan dukumeentiyada la xidhiidha cashuurta si ku habboon ayaa halkan loogu kaydin karaa, taas oo kuu badbaadinaysa wakhtiga iyo lacagta aad ku haysan lahayd warqad.
2. Qalabka dib u eegista
Khaladaadka iyo diidmada IRS waxay wax u dhimi kartaa sumcadda ururkaaga iyo sidoo kale wax soo saarkeeda. Natiijo ahaan, Drake Tax waxay bixisaa qalab dib u eegis sida talooyinka la dhisay si ay kaaga caawiyaan ka hortagga khaladaadka.
3. Soo Dejinta Xogta
Xogta waxaa laga yaabaa in si sahal ah looga keeno abka sida Client Write-up ama QuickBooks, taasoo ka dhigaysa nidaamka hirgelinta Drake mid aad u fudud oo toos ah. Haddii aad isticmaasho xaashida faafinta, waxaad si degdeg ah ugu soo dejin kartaa Cashuurta Drake.
Akhri ALSO: Maareeyaha Miisaaniyadda: Shaqooyinka, Mushaharka, Waxbarashada
4. Habka aan warqadda lahayn
Habka warqad la'aanta ee Drake Tax wuxuu ka kooban yahay sifooyin badan oo awood u siinaya jawi aan warqad lahayn marka la diyaarinayo oo soo gudbinayo canshuuraha, sida isweydaarsiga macluumaadka degdega ah, e-filing, iyo waraaqaha elektarooniga ah.
5. Drake Tax Planner
Tani waa mid ka mid ah dhinacyada ugu caansan ee Drake software, waxayna ka caawisaa diyaarinta canshuuraha qorsheynta canshuuraha macaamiishooda sanadka. Shaqadani waxay kuu ogolaanaysaa inaad si fudud u barbar dhigto xaaladaada cashuurta ee hadda iyo xaaladaha kale sida isbedbedelka dakhliga, iibsashada hantida, guurka, iyo wixii la mid ah.
6. Soo Celinta Xogta iyo Kaabta
Xogta macmiilku aad bay muhiim ugu tahay nidaam kasta oo cashuureed waana in si taxadar leh loola dhaqmaa.
Drake waxa uu leeyahay sifooyin badan, sida 'Automatic Backup' oo awood u siinaya diyaariyayaasha cashuuraha in ay ilaaliyaan xogta macaamiishooda. Waxa kale oo ay leedahay dib u soo celinta ikhtiyaarka ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad calaamadiso meesha aad rabto in xogta lagu soo celiyo.
Drake Tax waxay siisaa caawimo xitaa kuwa ugu dhameystiran, inkastoo xaqiiqda ah in inta badan ay isticmaalaan shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe.
Waxaa ku jira foomamka shuraakada, hantida, aaminaadaha, ururada cashuur dhaafka, C-corporations, S-corporations, dhammaan xirmooyinka federaalka, iyo 48 baakadaha gobolka (oo lagu daray Washington, DC), iyo sidoo kale dhammaan 1040 foom.
7. Drake Dashboard
Drake ayaa soo bandhigtay adeeg cusub oo ku salaysan mareegaha kaas oo u oggolaanaya diyaariyayaasha cashuuraha in ay si dhakhso ah ula socdaan waxqabadka ganacsiga iyaga oo u beddelaya xogta jaantusyo is dhexgal ah oo horay loo dhisay. Waxa kale oo ay qiimayn kartaa caafimaadka shirkadda iyada oo eegaysa tilmaamayaasha waxqabadka muhiimka ah ee tirada badan.
Badhanka 'Cilmi-baadhis' ee ku yaal aaladda aaladda ayaa si degdeg ah u gelisa qalabkan, kaas oo gacan ka geysta cilmi-baarista isbeddellada cashuuraha ee kala duwan. Markaad ku darto shuruudaha ama shabakadaha canshuuraha la xiriira sida IRS raadintaada, waxaad yareyn kartaa xitaa in ka badan.
ARAG SIDOO KALE: 10 Dariiqo oo ku Saabsan Sida Loo Bixiyo Canshuur Yar 2021 | Sirta Gudaha
Qaabka Qiimaha Software Drake Tax
Waxaa jira saddex ikhtiyaar oo xirmo ah oo laga dooran karo:
1. Drake Tax Unlimited + Drake Accounting Power Bundle ($1,695)
2. Drake Tax Unlimited ($1,595) — Barnaamij cashuureed loo dhan yahay
3. Bixinta-Soo-celinta-Qorshaha Bixi sida aad u socoto ($330 15 soo celin, $22 soo celin kasta oo dheeri ah)
Software-ka diyaarinta cashuuraha ee Drake waxa uu leeyahay awoodaha soo socda ee dhammaan noocyada diyaarka u ah iibsashada:
Xirmooyinka Gobolka oo dhan 1040, 1040NR, 1120, 1120S, 1120H, 1065, 706, 709, 990, 1041
Dukumentiyada Drake E-filing
Beddelka Xogta Software Abaabulayaasha Cashuuraha Drake Drake Scheduler
Drake Tax laga bilaabo 2002 ilaa 2018
Ka dib 85 soo laabashada, xidhmada lacag-celinta-ku-celinta waxay noqotaa mid aan xadidnayn. Intaa waxaa dheer, Drake Accounting Pro 2020 ayaa diyaar u ah $395 iyada oo qayb ka ah xirmada Drake Tax Unlimited ($ 795 haddii si gaar ah loo iibsado) iyo $495 iyada oo qayb ka ah xirmada-bixinta-ku-celinta. Waxay ku timaaddaa bilaash sidii sifada lagu daray ee Xidhmada Korontada.
Akhri ALSO: Dhammaan Beddelka Turbotax ee 2021? Isbarbar Dhigyada Degdegga ah
Waa maxay Platform-yada ku habboon Drake Software?
Waa kuwan qaar ka mid ah meelaha ku habboon ee Drake Software lagu isticmaali karo:
1. Drake kumbiyuutarkaaga
Drake Tax, Xisaabinta, iyo Documents waa qayb ka mid ah madalkan. Haddii aad ku doorato Drake desktop-ka, software-ka lagama maarmaanka ah ayaa lagu rakibay kombiyuutarkaaga oo laga heli karo halkaas. Qalabkani waxa uu ku kooban yahay miiskaaga, laakiin waxa uu bixiyaa faa'iidooyin sida xawaaraha hillaaca-dhakhso leh, socodka xogta otomaatiga ah, cusboonaysiinta software-ka fudud, e-filing, iyo in ka badan.
2. Hosted Desktop by Drake
Drake Tax, Accounting, iyo Documents ayaa lagu soo daray, waxaadna bixin kartaa lacag dheeraad ah si aad ugu darto barnaamijyo badan. Qalabkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku shaqeyso kombuyuutarkaaga goob shabakadeed, dayactir la'aan, iyo jawi anfacaya. Sababtoo ah waa madal daruur ku saleysan, waxaad ka isticmaali kartaa kumbiyuutar kasta oo leh xiriir internet oo aad si dhaqso ah ula falgasho dadka kale.
Drake's desktop-ka uu martigeliyay wuxuu ilaaliyaa xogtaada mid amaan ah wuxuuna ku siinayaa xoriyada aad ku shaqeyso sida aad u doorato. Marka la helo shatiga saldhigga, waxaa arki kara oo keliya hal isticmaale markiiba.
3. Xalka ku salaysan internetka
Xalka Shabakadda Ku-saleysan waa doorasho degdeg ah oo hufan. Waxay siisaa macaamiisha marin u helka khadka tooska ah waxayna u ogolaataa inay canshuur ka xareeyaan qalab kasta, oo ay ku jiraan taleefannada casriga ah iyo tablet-yada.
Drake's web tax software software wuxuu u oggolaanayaa isticmaaleyaasha inay diyaariyaan 1040 soo celin online ah, oo leh qorshooyin la hagaajin karo oo loogu talagalay hal goobood, goobo badan, iyo xitaa xulashooyinka lacag bixinta markaad tagto.
Diyaarinta 1040 soo celinta khadka, Drake Software wuxuu bixiyaa laba nooc: Drake Zero waxaa loogu talagalay codsiyo hal goob ah, halka Web1040 loogu talagalay codsiyada goobta badan (20 ama ka badan oo muuqaal ah). Dhammaan hawlaha kale waa isku mid, marka laga reebo kuwa la xiriira maareynta goobo badan.
Sababtoo ah Drake Zero iyo Web1040 waa codsiyo shabakad, dhammaan isticmaalayaashu waxay u baahan yihiin inay ku xidhaan internetka iyo nooca ugu dambeeyay ee biraawsarkooda ay jecel yihiin.
Uma baahna rakibid, cusbooneysiin, ama kaydin sababtoo ah waxay ku salaysan tahay shabakad. Taasi waxay sidoo kale ka dhigan tahay kharashyada software-ka ama mas'uuliyadaha ilaalinta.
Isticmaalayaashu waxay ka heli karaan Xalka Ku-saleysan Shabakadda meel kasta. Isticmaalayaashu waxay ka shaqayn karaan goob kasta oo leh marinka internetka, oo ay ku jiraan xafiiska, guriga, dukaanka qaxwaha, goobta macmiilka, iyo wixii la mid ah.
Xalka Shabakadda Ku-saleysan ayaa sidoo kale ah mid saaxiibtinimo leh, sidaa darteed waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa tablet-yada iyo taleefannada casriga ah. Xalka Shabakadda Ku-saleysan waxaa ku jira wax walba. Soo celin kasta waxa ku jira e-filing, daabacaadda, iyo kaydinta khadka ee muddada-dheer, iyo sidoo kale soo-noqosho dawladeed oo badan sida isticmaaluhu u baahan yahay.
Madalku waxa uu fududeeyaa in la ogaado waxa ka socda macaamiishooda iyo ganacsigooda iyada oo ay ugu wacan tahay warbixino awood leh. Isticmaalayaashu waxay la socon karaan soo celinta diyaarka u ah e-faylka, kuwaas oo la aqbalay, kuwaas oo u baahan taxadar dheeraad ah, kharashyo, iyo wixii la mid ah.
FAQs On Drake Tax Software Reviews
Waa maxay Drake Tax?
Waa maxay moodooyinka qiimaha ee lagu heli karo cashuurta drake hoosteeda?
Drake Tax Unlimited + Drake Accounting Power Bundle ($1,695)
Drake Tax Unlimited ($1,595) - Barnaamij cashuureed loo dhan yahay
Soo-noqosho-kasta--'Qorshaha Bixi markaad baxdo'
Ma yahay isticmaale-saaxiibtinimo software-ka cashuurta drake?
Drake waa isticmaale-saaxiibtinimo waxaanan aad ugula talineynaa dhammaan xirfadlayaasha canshuuraha.
Software-ka diyaarinta cashuuraha ee Drake ayaa ka sarreeya tartanka marka ay timaaddo qancinta diyaariyayaasha cashuuraha oo ay u fududeeyaan shaqadooda. Qalabkan oo dhan-in-mid ah ayaa leh astaamo aan kaliya caawinin si loo dhimo culeyska shaqada laakiin sidoo kale dardar geliya waxtarka habka canshuurta. Haddii aad leedahay shirkad leh duruufo cashuureed oo adag, Drake waxa laga yaabaa inay tahay ikhtiyaarka kuugu habboon ee aad ku maarayso.
10 Software -ka Canshuurta Crypto ee ugu Fiican 2021
Faallooyinka Software Cashuurta H & R Block 2021
Faallooyinka Canshuur -qaadaha 2021: Faylka Canshuuraha ee ugu Fiican Online ama Fadeexad
Faallooyinka FreeTaxUSA 2021: FreeTaxUSA Ma Xalaalbaa mise waa Fadeexad cusub?
Sababta Ganacsi kastaa ugu baahan yahay Garyaqaanka Canshuurta 2021 | Waa In La Akhriyo
Dib u eegida Caymiska Beeralayda 2021: Faa'iidooyinka & Qasaaraha | Legit Mise Fadeexad | Siday U Shaqeyso
12 Buug ee ugu Fiican Maalgashadayaasha | 2022 Waa inuu akhriyaa buugaagta Maalgelinta
Had iyo jeer waa fikrad aad u wanaagsan inaad maalgeliso qayb ka mid ah dakhligaaga, si ay kaaga caawiso inaad kordhiso kaydka hawlgabka…
Faallooyinka Decluttr 2022 Online: Sida Lacag Looga Sameeyo Decluttr
Ka warran haddii aan kuu sheego inay jirto hab sharci ah oo aad $1,000 kaga samayn karto alaabtaada warbaahineed?…
Barnaamijka cashuurta H&R Block wuxuu siiyaa adeeg cashuureed si sahlan loo isticmaalo e-filers-ka doonaya inay sheegtaan dakhligooda khuseeya,…
Soo -koobidda Buugga Mala -awaalka Farxadda | 2021
Farxaddu waa mid ka mid ah furayaasha lagu furo albaabka guusha iyo maalka. Waxaa jirta oraah ...